Nyowani rezinesi fair muGermany: Kekutanga mumatsutso - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Kurume 20, 2022 | nhau, Nuremberg Toy Fair, Events
Zvigadzirwa zvine marezinesi zviri mufashoni: Marvel Zombies, Tsamba Yerudo seJabba's Palace gadziriso, mitambo yemavhidhiyo yakavakirwa paMarvel, Star Wars kana Disney mafirimu - mabhureki makuru anowanzo shandiswa seane simba ekushambadzira midhiya kukwenenzvera mutambo kwete chete thematically asiwo zvekutengesa . Hurukuro nyowani rezenisi ikozvino yave kupa iyo indasitiri nzvimbo yakakura muGermany zvakare.
Spielwarenmesse eG neLicensing International vari kubatanidza hunyanzvi hwavo uye kutanga chiitiko chavo chekupa marezinesi kunharaunda inotaura chiGerman. Licensing-X Germany ichapa indasitiri yemarezenisi muGermany, Austria neSwitzerland chikuva chitsva uye zvichaitika panguva imwe chete seInsights-X kubva Gumiguru 5 kusvika 7th, 2022 muExhibition Center Nuremberg - iyo Expo yemapepa, hofisi uye. stationery (PBS) zvakare yakarongwa naSpielwarenmesse eG.
Mafambiro emusika nekutarisa
"NeLicensing-X Germany, tiri kuwedzera portfolio yedu mumusika uri kukurumidza kukurumidza watinoziva uye unoshanda muzvikamu zvese," akadaro CEO Christian Ulrich pakuwedzera kuSpielwarenmesse eG. Sekureva kweLicensing International, kutengeswa kwepasi rose kwezvinhu zvine rezinesi uye masevhisi kunosvika madhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematatu emadhora. Pane izvi, anenge mabhiriyoni gumi nerimwe emadhora ekuAmerica anowira pamusika weGermany. Iwo akasiyana-siyana anosanganisira zvigadzirwa zvezvipfeko, matoyi, zvishongedzo zvemafashoni, mitambo yemavhidhiyo, zvekushongedza kumba, girosari, shangu, zvekuzora, mitambo uye zvipo.
Licensing International yakavambwa muna 1985 uye yakamiririrwa muGermany kubvira 2001 nechiitiko cheMarezenisi Musika. "Basa redu rekutanga nderekusimudzira ruzivo nezveindasitiri yemarezinesi uye mabhenefiti ayo akawanda pasi rese," akadaro Maura J. Regan, Mutungamiriri weRezinesi International. "Licensing-X Germany ichawedzera kukura uye kuwedzera muGermany sezvatinoramba tichibatana nenyanzvi dzinokosha muindasitiri yekupa marezinesi."
Neiyo nyowani yerezinesi fair, Spielwarenmesse eG iri kuramba ichiwedzera kushandira pamwe kwayo neLicensing International. "Chinangwa chedu chakafanana ndechekuve chikuva chinotungamira chebhizinesi rekupa marezenisi munyika dzinotaura chiGerman," anosimbisa Peter Hollo, uyo anoona nezvezviitwa zveLicensing International muGermany.
Rezinesi-X Germany ichavaka pamusoro pekubudirira kweMusika weMarezenisi uye inopa hurongwa hutsva uye mukana wetiweki pazvikamu zvese zveindasitiri yese yemarezenisi. Maitiro matsva mumusika, akadai seyekutepfenyura masevhisi uye NFTs, anofanirwawo kuuya mukutarisa uye kuvhura mahorizoni matsva nemikana inonakidza yebhizinesi.
Spin Master Mitambo - Jumanji - mutambo wemhuri wakazara chiitiko ... * 24,99 EUR tenga
Kare New State Mobile: New update neMcLaren kubatana
Inotevera WWE 2K22 muyedzo: Yakasiyana, iri nani, isina kukwana
Shifu Orboot: Globhu yeAR inopa ruzivo rwejogirafi kuvana
Apex Legends Mwaka wechinomwe: mepu yeOlympus uye ngano nyowani yakaburitswa
Pegasus Spiele inorova yekuvhima kwekutengesa: Tenga zvakachipa bhodhi mitambo online
Mutambo webhodhi weAnno 1800: Zvikanganiso mumirairo